Mikel Arteta oo si niyadjab leh kaga hadlay mustaqbalka Mesut Özil ee kooxda Arsenal – Gool FM
(London) 24 Sebt 2020.Tababaraha Isbaanishka ah ee kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa xaqiijiyay in Mesut Özil uu ka baxay qorshihiisa mudada soo socota.
Mesut Özil oo loo tixgaliyaa inuu yahay xiddiga ugu mushaarka badan kooxda Arsenal ayaan wax kulan ah u ciyaarin Gunners, tan iyo markii laga soo laabtay xayiraada Korona bishii June ee la soo dhaafay.
Wargeyska “Daily Star” ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay tababare Mikel Arteta, wuxuuna yiri:
“Way ku adagtahay Mesut Özil iyo ciyaartoyda qaar in lagu daro shaxda kooxda”.
“Way ku adag tahay kuwa kale ee aan ka qeybgalin Horyaalka Ingiriiska”.
“Waxaan ka baqayaa in su’aalo la weydiiyo, laakiin waa inaan shaqadeyda u qabtaa sida ugu macquulsan, waxaan doortaa ciyaartoyda ku jirta xaalada ugu fiican”.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka tababare Mikel Arteta ayaa wuxuu imaanayaa kaddib guushii ay xalay Arsenal kaga gaartay kooxda Leicester City koobka Carabao Cup 0-2, ciyaar aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka King Power.